Ọ dị onye maara nke onye ọzọ na Samsung Kies? M nwere nke a efu software na anọ arụ ọrụ usoro na m nwere ike jikọọ ekwentị m (Galaxy S2) ka ọ bụla nke um. M na-eji na-enwe ike jikọọ na otu agadi XP usoro ma nke ahụ bụ agaghịkwa na-arụ ọrụ ugbu a m na-stumped ...... n'ụkọ nke a mma okwu. All m chọrọ ime bụ na-foto m gbanyụọ ekwentị, ma Samsung yiri ka a ga na-enweghị na software ngalaba.
Ekele ya nkenke interface na free ojiji, Samsung Kies na ọtụtụ-eji maka Samsung ngwaọrụ management na kọmputa na-agba ọsọ Windows na Macintosh. Otú ọ dị, Samsung Kies bụghị zuru okè na ya nwere ụfọdụ flaws na ahapụ gị adịghị enwe afọ ojuju. Ọtụtụ Samsung ọrụ mkpesa na Samsung Kies ada ada jikọọ ha ngwaọrụ. E wezụga, ọ bụ naanị na-eji maka Samsung ngwaọrụ. Mgbe abịa ijikwa ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka HTC, LG, Motorola, Samsung Kies amama na-abaghị uru. Ọ bụrụ na ị na-enye Samsung Kies ma na-achọ uzo ozo, ị nwere ike akwụsị ebe a. A bụ ndepụta banyere 6 Samsung Kies uzo ozo, ị nwere ike họrọ a kasị mma maka onwe gị.
Samsung Kies bụ mkpofu, ị na-eche otú ahụ?
1. Alternative maka Kies - MobileGo
MobileGo enye a otu nkwụsị ngwọta ka ị ndabere data na Android ngwaọrụ gị na kọmputa na otu Pịa. Ị nwere ike iji ya selectively ndabere ihe ị chọrọ na Android na ngwaọrụ dị kọntaktị, foto, music, video na ndị ọzọ. Jikwaa gị dum mobile si ebi ndụ na otu adaba ebe.
* Alala nyefee data n'etiti Android na PC.
* Download, jikwaa, mbubata / mbupụ music, videoclips, foto
+ Ike toolkits jikwaa / azụ / weghachite kọntaktị gị, SMS, calllogs, ngwa ọdịnala wdg na mobile
* Enwekwukwa atụmatụ ime ka gị na mobile nchebe, Cleaner na ngwa ngwa
* Were akara gị mobile na kọmputa, enwe gị egwuregwu na Big ihuenyo
2. Họrọ ọzọ - MobileTrans
Wondeshare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac Ẹda dị ka a kasị mma ọzọ ka Kies. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ma Windows na Macintosh, na-eji maka ijikwa ihe niile na Android ngwaọrụ. E wezụga Samsung, ọ na-arụ ọrụ ọma HTC, LG, Motorola, Google, ZTE, Sony, Huawei, na ndị ọzọ.
* 1 pịa nyefee data gị Samsung ngwaọrụ ọzọ.
* Akwado fọrọ nke nta niile dị iche iche nke Samsung ngwaọrụ, ihe karịrị Kies.
* Enye gị nyefee kọntaktị, ozi, photos, video, music, oku na-aga log, kalenda, na ngwa ọdịnala na 1 Pịa.
* E wezụga si Samsung ka Samsung, ị nwekwara ike nyefee data n'etiti ndị ọzọ Android ngwaọrụ, na-akwado ruo 3K ngwaọrụ.
* Ọzọkwa, ị pụrụ nyefee data n'etiti dị iche iche OS, dị ka n'etiti iOS na Android, nakwa Symbian.
* Akwado ebufe ndabere faịlụ site Kies, Blackberry, iTunes, na iCloud gị Android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ.
* Ị pụrụ nkwado ndabere na mpaghara weghachite data na gị Android na iOS ngwaọrụ gị na kọmputa bú ya.
3. Alternative maka Kies - MyPhoneExplorer
MyPhoneExplorer bụ ihe dị mfe na-eji ekwentị Explorer maka ijikwa gị Sony na ndị ọzọ na Android ngwaọrụ. Iji jikọọ ihe Android na MyPhoneExplorer, i nwere atọ nhọrọ: WiFi, eriri USB na Bluetooth.
Ọ na-enyere ị na-ahazi faịlụ na SD kaadị, mmekọrịta Outlook, Thunderbird, na mbubata na mbupụ SMS. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ekwe ka ị na nkwado ma weghachite gị gam akporo ngwaọrụ na 1 Pịa. Ọ bụ naanị maka foto management. Dị ka music na video, ọ na-enyo na-abaghị uru. Ka njọ, mgbe ọ na-abịa ngwa management, nanị ihe ọ enye gị ohere ka ihichapụ ngwa, nke i nwere ike ime na na Android ngwaọrụ.
4. Alternative ka Kies - MOBILedit
MOBILedit bụ ikpo okwu na-arụ ọrụ na ọtụtụ ntị na mbadamba na-agba ọsọ Android, iOS, Symbian, Blackberry, Windows Mobile, Bada, na ndị ọzọ OS site WiFi, Bluetooth na eriri USB.
Na ya, i nwere ike ịdọrọ na dobe photos, music, videos na akwụkwọ n'etiti ekwentị gị na mbadamba na PC, Mee ụdaolu, hazie kọntaktị ma jikwaa ngwa. E wezụga, ndabere ekwentị gị na mbadamba na dịghachi mgbe nọ ná mkpa.
Otu emezighị emezi bụ na MOBILedit adịghị enye ị download center. Ọ pụtara na, ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata ihe na ekwentị gị na mbadamba, ị ga-download PC mbụ, na mgbe mbubata na ekwentị gị na mbadamba.
5. Alternative ka Samsung Kies - AirDroid
Dị ka aha ya na-egosi, AirDroid bụ ngwa na-enyere gị aka jikwaa gị Android ekwentị na mbadamba n'elu ikuku. Ọ na-enyere gị dezie SMS na-ezite ya site na kọmputa, ngwa ngwa wụnye na mbupụ ngwa, akpali video, photos, ụdaolu na ndị ọzọ na anya gị Android ekwentị na mbadamba. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị n'ihi na ị na-ndabere ma ọ bụ weghachi gị Android ekwentị na mbadamba.
6. Samsung Kies ọzọ - doubleTwist
doubleTwist bụ tumadi Mmanu n'ihi na ị ka mmekọrịta music, video na foto site na iTunes gị na ekwentị mkpanaaka-ejighi eriri ma ọ bụ na a eriri USB. Otú ọ dị, ọ pụrụ ime ihe ọ bụla jikwaa kọntaktị, SMS na ngwa ọdịnala na ekwentị mkpanaaka gị, ka naanị kwado na weghachite ekwentị mkpanaaka gị.
3 Ụzọ nyefee iTunes ka Samsung
Wụnye, Uninstall, Update Samsung Kies on PC
Wụnye, Uninstall, Update Samsung Kies on Mac
Nyefee Data si gam akporo ka Samsung
Nyefee faịlụ site Nokia ka Samsung
Bugharịa Data si HTC ka Samsung
> Resource> Android> Top 6 Samsung Kies Alternatives